Ọnụ ọgụgụ mgbanwe ọnụ ọgụgụ zuru oke n'ụwa dum. Akpa ejiji gị na ọnụego mgbanwe, chaatị na okpu ahịa nke nhọrọ ego dijitalụ. 8727 ego dijitalụ ezigbo oge data.
USD - US dollar BTC - Bitcoin EUR - Euro GBP - pound magburu onwe JPY - Yen CNY - yuan RUB - Russian ruble AUD - Aussie dollar AZN - Azerbaijani Manat ALL - Albanian agha DZD - Algerie dinar XCD - East Caribbean dollar AOA - kwanza MOP - Macanese pataca ARS - Argentine peso AMD - Armenian DRAM AWG - Aruban florin AFN - Afghan afghani BSD - Bahamian dollar BDT - Bangladesh Taka BBD - Barbados dollar BHD - Bahrain dinar BYR - Belarusian ruble BYN - Belarusian ruble BZD - Belize dollar XOF - CFC franc BMD - Bermuda dollar BGN - Bulgarian lev BOB - Bolivian boliviano BAM - Bosnia na Herzegovina kọnvatịbụl akara BWP - Botswana pula BRL - Brazil n'ezie BND - Brunei dollar SGD - Singapore dollar BIF - Burundi franc BTN - Bhutan ngultrum INR - Indian rupee VUV - Vanuatu vatu HUF - Hungarian forint VEF - Venezuelan Bolivar Fuerte VND - Vietnamesse Dong XAF - CFC franc HTG - Haitian gourde GYD - Guyana dollar GMD - Gambian dalasi GHS - Ghana cedi GTQ - Guatemalan quetzal GNF - Guinea franc GIP - Gibraltar pound HKD - Hong Kong dollar HNL - Honduran Lempira GEL - Georgian lari DKK - Danish okpueze DJF - Djibouti franc DOP - Dominican peso EGP - Ijipt pound ZMW - Zambia kwacha MAD - Morocco dirham ZWD - Zimbabwe dollar ILS - Israel ọhụrụ shekel IDR - Indonesian rupiah JOD - Jordan dinar IQD - Iraqi dinar IRR - Iranian rial ISK - Iceland krone YER - Yemeni rial CVE - Cape Verde escudo KZT - Kazakhstani tenge KYD - Cayman Islands dollar KHR - Kambodia riel CAD - Canadian dollar QAR - Qatari riyal KES - Kenya shilling COP - Colombian peso KMF - Comoran franc CDF - Congo na franc KPW - North Korean merie KRW - South Korean merie RSD - Serbian dinar CRC - Costa Rica colon CUP - Cuban peso KWD - Kuwaiti dinar NZD - New Zealand dollar KGS - Kyrgyzstani som LAK - Lao kip LVL - Latvian lat LSL - loti ZAR - Rand LRD - Liberia dollar LBP - -agbaso n'ife ofufe pound LYD - Libyan dinar LTL - Lithuanian litas CHF - Swiss franc MUR - Mauritius rupee MRO - Mauritanian ouguiya MGA - Malagasy ariary MKD - Macedonian denar MWK - Malawi kwacha MYR - Malaysin ringgit MVR - Maldivian rufiyaa MXN - Mexico peso MZN - Mozambique metical MDL - Moldova leu MNT - Mongolian tugrik MMK - Burmese kyat NAD - Namibia dollar NPR - Nepalese rupee NGN - Nigerian naira ANG - Antilliaanse Gulden NIO - Nicaragua Cordoba XPF - French Pacific franc NOK - Norwegian krone AED - UAE Dirham OMR - Omani rial SHP - Saint Helena pound PKR - Pakistan rupee PAB - Panamanian balboa PGK - kina PYG - guarani PEN - Peruvian nuevo Sol PLN - Polish zloty RWF - Rwandan franc RON - Romanian leu XDR - SDR (Special na-eru ikike) SVC - Salvadoran colon WST - tala STD - São Tomé na Príncipe dobra SAR - Saudi riyal SZL - lilangeni TRY - New Turkish lira SCR - Seychelles rupee SYP - Siria pound SKK - Slovak koruna SBD - Solomon Islands dollar SOS - Somali shilling SDG - Sudanese pound SRD - Surinam dollar SLL - Leone TJS - Tajikistani somoni THB - Thai baht TWD - Taiwan ọhụrụ dollar TZS - Tanzania shilling TOP - pa`anga TTD - Trinidad na Tobago dollar TND - Tunisian dinar TMM - Turkmenistan Manat TMT - Turkmenistan ọhụrụ Manat UGX - Uganda shilling UZS - Uzbekistan nchikota UAH - hryvnia UYU - Uruguayan peso FJD - Fiji dollar PHP - Philippines peso FKP - Falkland Islands pound HRK - Croatian Kuna CZK - Czech koruna CLP - Chile peso SEK - Swedish krona LKR - Sri Lanka rupee ERN - nakfa ETB - Etiopia birr JMD - Jamaican dollar SSP - South Sudanese pound CLF - Chile Unidad de Fomento EEK - Estonian Kroon GGP - Guernsey pound IMP - Manx pound JEP - Jersey pound MTL - Maltese lira XAG - Troy ounce nke ọla ọcha XAU - Troy ounce nke ọla edo / electronic gold) ZMK - Zambia kwacha ZWL - Zimbabwe dollar ATS - Austrian shilling AON - Angolan ọhụrụ kwanza BEF - Onye Belgium franc GRD - Greek mkpụrụ ego drakma IEP - Irish pound ESP - Spanish peseta ITL - Italian lire CYP - Cyprus pound DEM - Deutsche akara NLG - Netherlands guilder PTE - Portuguese escudo SIT - Slovenian tolar SRG - Surinam guilder FIM - Nku azu akara FRF - France eziokwu ECU - ECU YUM - Yugoslavian ọhụrụ dinar
Nkeji 5 ọ bụla Kwa 15 nkeji Awa ọ bụla
Gosi: ego taa ndepụta chaatị ahịa okpu akara map ahịa olu ahia olu nke ahia
BTC = 62 514.51 USD
Bitcoin ọnụahịa dị na chaatị
Bitcoin ahịa okpu
1 181 654 152 327.50 US dollar
+11 873 740 278.90 USD (+1.02%)
mgbanwe nke nnukwu aha kemgbe ụnyaahụ
Tinye wijetị a na ebe nrụọrụ weebụ gị ma ọ bụ blog.
ETH = 4 213.09 USD
Ethereum ọnụahịa dị na chaatị
500 270 850 004.29 US dollar
+12 513 470 646.55 USD (+2.57%)
XRP = 1.11 USD
XRP ọnụahịa dị na chaatị
XRP ahịa okpu
52 646 850 162.91 US dollar
+1 306 267 546.31 USD (+2.54%)
BCH = 624.36 USD
Bitcoin Cash ọnụahịa dị na chaatị
Bitcoin Cash ahịa okpu
11 769 485 164.78 US dollar
+7 164 383.87 USD (+0.06091%)
EOS = 4.88 USD
EOS ọnụahịa dị na chaatị
EOS ahịa okpu
4 709 682 000.31 US dollar
+84 164 475.65 USD (+1.82%)
Ọnụ ego mgbanwe ego ọ bụla n'ụwa. Onye ntanetị ego na ego ọzọ ma ọ bụ ezigbo ego.
Ọnụ ọgụgụ mgbanwe ọnụ ọgụgụ zuru oke n'ụwa dum. Ọnụ ahịa taa nke ihe ọ bụla ego ego.
Ọnụ ego mgbanwe ego ntanetị n'ịntanetị, uru oge bara uru.
Ụdị akụkọ ihe mere eme nke ego. Ọnụahịa ahịa ego, ọnụọgụ ego ego ọnụahịa.
Nchịkọta na ahịa ego dijitalụ: ọtụtụ nkwa, ego dị iche iche a pụrụ ịdabere na ya ma dị oke ego ugbu a.
Nile ego dijitalụ na nkezi ha taa.
All ego dijitalụ na ha kacha mma taa taa.
All ahịapto ahịa n'ụwa nile na ọnụego mgbanwe nke taa na ire ahịa.
All ego dijitalụ na ha capitalization na olu nke ahia taa.
Ọnụego mgbanwe Ego ego na weebụsaịtị anyị gosipụtara ọnụahịa ugbu a nke ọ bụla n'ime ego ego ahọrọ maka taa. A na-agbakọ ọnụ ahịa mgbanwe Ego ego dị ka nkezi ụkpụrụ maka ahịa ahịa crypto niile n'ụwa ebe a na-ere ahịa ego ego taa. You nwere ike ịgbaso ọnụego mgbanwe ego kọmputa iji chọta ọnụego mgbanwe ego ego kacha mma maka ịzụrụ na ire.
Ọnụ ahịa mgbanwe ego ego nke saịtị anyị na-emelite kwa sekọnd iri atọ ọ bụla. Mụta usoro mgbanwe ego crypto na ntanetị n'efu na ugbu a na oge.
A na-ere ọnụahịa mgbanwe ego ego na mgbanwe crypto-crypto na ahịa crypto dị iche iche. N'adịghị ka ego ochie, ọ nweghị onye setịpụrụ ọnụego ya maka taa ma ọ bụ echi. Na mgbanwe ego ego ọ bụla, ọnụego mgbanwe ego ego na - agbanwe n'oge oge dị iche. Iji ghọta n'ụzọ ziri ezi ọnụego ego ego, ugbu a ọ dị mkpa ka ị gbakọọ atụmatụ ọnụego mgbanwe ego na ahịa ahịa crypto niile.
Cryptoratesxe.com gbakọọ ọnụ ahịa mgbanwe ego ego ego ozugbo na ahịa crypto niile.
Ngbanwe Ego ego, onu ahia ntaneti
Anyị na-elele mgbe niile 8727 mgbanwe ego ego ego na ahịa ahịa crypto niile dị n'ụwa.
Enwere ọtụtụ ego ego na ọ bụghị ha niile ka erere ahia na mgbanwe crypto ụbọchị niile.
Anyị na-enyocha nke a na-ere ahịa crypto nke na-ere ahịa crypto ma na-anakọta ọnụego ọnụego ego ego maka azụmahịa niile emere na ahịa ahịa crypto niile iji gbakọọ nkezi ọnụego nke ego ego a. You nwere ike na-elele maka ngbanwe ego nke ego ego ọ bụla na nke ọzọ.
You nwere ike soro ọnụego mgbanwe nke otu ego ego ikwu na ibe ya site na iji panel nkeonwe. A na-egosipụta ọnụego crypto n'ụdị eserese na ọnụọgụ, a na-egosipụta mgbanwe ọnụego n'ọhịa iche na pasent. A na-egosipụta Ego ego etolite na ego ego na agba dị iche iche.
Ọnụego mgbanwe ego ego kacha mma.
Enwere ike amụrụ ọnụego mgbanwe ego ego kachasị mma na eserese nke mgbanwe ozugbo na ọnụego ego ego na ogwe saịtị ma ọ bụ na ibe mgbanwe ego nke ntanetị nhọrọ ego ego ahọtara. Mgbe ọnụego ego ego gosipụtara uru dị ntakịrị - nke a bụ oge kachasị mma maka ịzụta, na mgbe ego ego ruru ọnụego mgbanwe kachasị - ọ bụ oge kachasị mma maka ire ahịa crypto.
Ọnụego mgbanwe maka Bitcoin ọnụego mgbanwe maka taa 26 October 2021
Ọnụego mgbanwe Bitcoin maka taa bụ ozi bụ isi nke ọtụtụ mmadụ na-eji. You nwere ike chọpụta ọnụego nke Bitcoin maka taa maka ego ego ọ bụla na ego ụwa ọ bụla na weebụsaịtị anyị.
Anyị na-egosi ọnụego mgbanwe nke ego ego niile kwa ụbọchị na anyị maara ọnụego ọ bụghị naanị maka taa, kamakwa kwa ụbọchị.
E guzobere ọnụego nke Bitcoin n'ihi ahia na mgbanwe dị iche iche na oge ụfọdụ, nke dabere na ike nke azụmaahịa crypto. Site n’ịmụta mgbanwe dị na ọnụego Bitcoin n'ịntanetị n’oge na-adịbeghị anya, ịnwere ike ịkọ amụma ọnụahịa ego ego maka taa.
Bitcoin ọnụego mgbanwe ego ego maka echi 27/10/2021
Na Bitcoin ọnụego mgbanwe ego ego maka echi, 27/10/2021 site na nkezi uru kwa ụbọchị dabere Bitcoin ịzụ ahịa na mgbanwe taa. Echi Bitcoin ọnụego mgbanwe bụ ntọala maka mgbanwe Bitcoin n'ebe ndị gbanwere 27/10/2021.
Ya mere, site na inyocha mgbanwe nke Bitcoin na ngbanwe na weebụsaịtị anyị n’ehihie, ị nwere ike ịkọ ọnụego nke Bitcoin echi na mgbanwe ọnụego nke Bitcoin na ntụgharị ntanetị echi 27/10/2021.
Guzosie akara Bitcoin na isi ibe nke weebụsaịtị ego ego wee lelee ntanetị nke Bitcoin. Will ga-ewere ọnụego nke Bitcoin maka echi.
Ọnụego mgbanwe nke Bitcoin megide dollar taa
Bitcoin ka ọnụego mgbanwe dollar taa bụ ọnụego mgbanwe Bitcoin ọnụego mgbanwe n'ụwa ahịa. Ọ bụ ọnụego mgbanwe nke Bitcoin megide dollar na-ekpebi ọnụego mgbanwe nke Bitcoin megide ego ndị ọzọ.
You nwere ike ịhụ ọnụego dollar nke Bitcoin na dollar dollar ebe a .
Ọnụego mgbanwe nke Bitcoin megide euro taa
Ọnụego mgbanwe nke Bitcoin na euro maka taa ka a na-egosi n’ibe ọnụọgụ weebụsaịtị cryptoratesxe.com
Bitcoin ka ọnụego Euro maka taa - eserese nke Bitcoin ọnụego Euro bụ nkezi maka mgbanwe ego crypto niile.
Ọnụego mgbanwe Bitcoin ọnụego mgbanwe megide euro dị ka otu n'ime ihe dị mkpa na ụwa na-ekpebi Bitcoin ọnụego mgbanwe megide ego ndị ọzọ n'ụwa. Sochie Bitcoin ọnụego mgbanwe maka taa na dashboard nke ntanetị anyị.
Ọnụego mgbanwe nke Ethereum megide dollar taa
Ka ọnụego mgbanwe dollar Ethereum gaa dollar dollar maka taa - ọnụego mgbanwe ego Ethereum ugbua na azụmaahịa niile dị na ahịa ụwa niile. Ọnụego Ethereum na dollar na-ekpebi ọnụego Ethereum na ụlọ ọrụ ndị ọzọ na ego ego.
You nwere ike ịhụ ọnụego dollar nke Ethereum na dollar dollar ebe a .
Ọnụego mgbanwe nke Ethereum megide euro taa
Ọnụego mgbanwe nke Ethereum na euro maka taa ka a na-egosi n’ibe ọnụọgụ weebụsaịtị cryptoratesxe.com
Ethereum ka ọnụego Euro maka taa - eserese nke Ethereum ọnụego Euro bụ nkezi maka mgbanwe ego crypto niile.
Ọnụego mgbanwe nke Ethereum na euro na dollar ka ego ndị ụwa na-esetịpụrụ ntọala maka ọnụego Ethereum na ego niile nke ụwa. Soro Ethereum maka taa na ntanetị weebụ anyị.
Ọnụego mgbanwe nke Litecoin megide dollar taa
Ọnụego mgbanwe Litecoin na dollar taa - nkezi ọnụego Litecoin ugbu a bụ ahịa nke mgbanwe ego crypto. Ọnụego nke Litecoin na dollar na-ekpebi ọnụego nke Litecoin gaa ego dị iche iche na ego ego.
Lee Litecoin ka dollar ọnụego mgbanwe n'ịntanetị ebe a .
Ọnụego mgbanwe nke Litecoin megide euro taa
Ọnụego mgbanwe Litecoin ruo Euro maka taa ka egosiri ebe a na ibe pụrụ iche.
Litecoin ọnụego mgbanwe euro maka taa - na ntanetị Litecoin ọnụego euro bụ nkezi nke mgbanwe ego ego.
Ọnụego mgbanwe nke Litecoin na euro na dollar ka ego ndị ụwa na-esetịpụrụ ntọala maka ọnụego Litecoin na ego niile nke ụwa. Soro Litecoin maka taa na ntanetị weebụ anyị.
Ọnụego mgbanwe nke XRP megide dollar taa
Lee XRP ọnụego dollar n'ịntanetị .
Ọnụego mgbanwe XRP na dollar taa - nkezi XRP dị ugbu a na azụmaahịa crypto. Ọnụego XRP na dollar na-ekpebi ọnụego XRP na ụlọ ọrụ ndị ọzọ na cryptocurrenrency ndị ọzọ.
Ọnụego mgbanwe nke XRP megide euro taa
Na XRP ọnụego mgbanwe euro maka taa ka egosiri na ibe dị iche.
XRP na-atụ ọnụego euro maka taa - na XRP ọnụego euro na ntanetị bụ nkezi na mgbanwe ego ego.
Nkpukpu ego nke XRP na euro na dollar dika isi ego bu ihe ndabere nke ego XRP na ego ndi ozo. Soro ọnụahịa XRP maka taa n'ụgwọ mgbanwe ego nke weebụsaịtị anyị n'ịntanetị.